DFS oo Samaysay Xarun loogu talo galay Gar-gaarka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii shalay. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
October 15(FMN) – Xukumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ay aas-aastay xarun ku meel gaadh ah oo lagu aruurinayo kaalmooyinka deg-dega ah ee la doonayo in lagaadhsiiyo shacabkii ku waxyeeloobay qaraxii cuslaa ee maalintii shalay ahayd ka dhacay magaalada muqdisho. Agaasimaha Xafiiska warfaafinta ee Madaxtooyada Soomaaliya Mudane,Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa arintani ku sheegay war qoraal ah oo uusoo dhigay barta uu ku leeyahay faceboog-ga .Qoraalka agaasimaha ayaana uqornaay sidatan:-
“,Waxaan ku suganahay xarunta Hargaha iyo Saamaha oo loo asteeyay in ay noqoto Xarun Gurmad looga fidiyo dadka ku waxyeelloobay qaraxyadii shalay.Dadka Soomaaliyeed ee doonaya in ay xoog iyo xoolo ku taageeraan walaalaha uu dhibka kasoo gaaray, fadlan halkan keena.Waxaa ku diyaarsan guddi uu RW Xasan Cali Khayre u magacaabay hawshan iyo dhallinyaro mutadawiciin oo 40 kor u dhaafaya.Xaalado aad u liita ayaa laga soo sheegayaa Rugaha Caafimaadka oo ay kamid tahay daawo yari, biyo yari iyo cunto la’aan.Bahda saxaafadda waxaan ka codsanayaa in ay wariyeyaal usoo diraan xarunta gurmadka laga wado si bulshada loogu gudbiyo hawlaha socda.Qof walboow masuuliyad isa saar. Yaan loo kala harin gurmadka.”
Ra’isul wasaaraha soomaaliya Mudane;Xassan Cali Kheyre ayaa goor sii horeysay sheegay in dhammaanba dadka qaba dhaawacyada halista ee aan gudaha waxba looga qabani karin ay dalka debadiisa u qaadayaan,si ay u helaan daryeel caafimaad oo waafi ah.Ra’isul wasaaraha ayaa sidoo kale faray shaqaalaha dawlada iyo maamulka gobolka banaadir in ay ka qeybqaataan gurmadka loo fidinayo dhibbaneyaasha qaraxaasi.
Si kastaba ha ahaatee,waxaa wali sii kordhaya khasaaraha nafeed ee ka dhashay qaraxaasi,iyada oo marba marka ka danbaysa ay kor usii kacayso tirada dhimashada oo sii cagacagaynaysa 240 halka dhaawacuna 300 ku sii dhawyahay,iyadoo goobaha caafimaadkana ay ka jirto baahi balaadhan oo dhanka adeega caafimaadka ah.
Previous Previous post: Khasaaraha ka dhashay qaraxii shakay muqdisho ka dhacay oo sii kordhay.
Next Next post: Wafti uu hoggaaminayo Ra’isul wasaare ku xigeenka DF Itoobiya oo soo gaadhay Magaalada Jig-jiga.